ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှိ Gulf Jobs
ပင်လယ်ကွေ့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ ဖြစ်လာသည် ညီညွတ်သောအာရပ်ကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အခြားသောလမ်း။ သင်အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ Forbes မဂ္ဂဇင်းကထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းကုမ္ပဏီများ 2016 အတွေ့အကြုံကြီးထွားလာ၏အနည်းငယ်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ချိန်, စီးပွားရေးထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည် 2018 နှင့်နှစ်ပေါင်း 2019 နှင့် 2020 အောက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများသည်ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နောက်တဖန်အတက်ခူး။
ရလဒ်အတိုင်း, အသစ်သောစီမံကိန်းများကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒေသတလွှားစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တွေ။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲ 2020 လည်းအသစ်သောငှားရမ်းမြှင့်လာတယ်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီ, အဘို့။
ယူအေအီးအတွက်နိုင်ငံပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းများအချို့အများကြီးပိုမြန်ကြီးထွားလာကြသည်ပေမယ့်။ နှင့်ပိုပြီး ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နေဆဲသစ်ကိုငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကုန်စည်ပြပွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေယူဆောင်လာများနှင့်စီစဉ်ထားသည့်သစ်ကိုတည်ဆောက်မှုများအကောင်အထည်ဖော် ယူအေအီးအတွက်စီမံကိန်းများကို.
ထိပ် 100 ၏စုစုပေါင်းစျေးကွက်တန်ဖိုး အာရပ်ကမ္ဘာအတွက်ကုမ္ပဏီများမှ ယခင်နှစ်ကပေါ် 772% ရရှိမှု, ဧပြီ 2017 အတွက် $ 12 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယူအေအီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်လယ်ကွေ့စီးပွားရေးများအတွက်စုစုပေါင်းစျေးကွက်တန်ဖိုး extensionally ကြီးထွားလာ။
ထို့အပွငျအဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းကနေကုမ္ပဏီအများစုအပေါ်များမှာ အာရပ်စုဆောင်းမှုကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်တန်း 100 ကုမ္ပဏီများမှ။ နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူဧပြီလ 772 အတွက် $ 2017 ဘီလီယံအထိဒူဘိုင်းရဲ့ကုမ္ပဏီများမှကနေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်ကပေါ် 12% ရရှိမှု၏ဒါအများဆုံး။
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများသည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသားတင်အမြတ်အစွန်းစုပေါင်း။ သူတို့ကအစသူတို့ကနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒီလမ်းအတွက် 9.7% အားဖြင့် HR အပေါ်အသုံးစရိတ်လျော့နည်းသွားပါပြီ $ 52.9 ဘီလီယံအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရောင်းအားရောက်ရန်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သစ်ကိုစီမံကိန်း၏အပြုသဘောစုစုပေါင်းငှားရမ်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ တဦးတည်းသောနေရာများဆက်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကဏ္ဍများမှာပါ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအခွင့်အလမ်းအတိုင်းဤကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Etisalat ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အကြီးမားဆုံးဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း။
ထိုမှတပါး, အားလုံးမက်ထရစ်ကုမ္ပဏီအများစုကာတာနိုင်ငံအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကြီးထွားလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်အကြီးမားဆုံးစက်မှုကုမ္ပဏီများကသိမ်းယူနိုင်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီများ၏ 2.8% တိုး၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ကာတာနိုင်ငံ, ကူဝိတ်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ဒူဘိုင်းနှင့်ဒိုဟာအတွက် $ 3.8 ဘီလီယံအထိရောင်းအားရောက်ရှိဖို့ထက်ပို 288.3% ရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများ, ကျော် $ 2.7 ထရီလီယံရောင်းအားရဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲ 2008 နှင့်ရှာဖွေနေ 2019 စဉ်အတွင်းအသီးသီးကြီးထွားလာဖို့ forward.
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများဤကုမ္ပဏီများသည်အတွက်အလုပ်ရရန်ကြိုးစားနေ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်တစ်အတော်လေးတည်ငြိမ်အလုပ်အကိုင်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ပင်လယ်ကွေ့ဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှု ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
ကူဝိတ်နှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာအခြေစိုက်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုမှာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဒူဘိုင်းနေဆဲလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ် 36 ကုမ္ပဏီများနှင့်စာရင်း။ အဆိုပါအများစုဟာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူယူအေအီးမှကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျကနေပြောင်းရွှေ့။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ4တိုက်ကြီးအတွင်းကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ ထိုသူတို့က 50 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိနေခြင်းရှိခြင်းနေကြသည်။ အဆိုပါ အသီးသီးအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများမှ.
သင်တို့သည်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလွယ်တကူဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငှားရမ်းသူယူအေအီးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတွေထက်ပို 59% ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းလျှင်။ တဖန်သင်တို့ဘဏ္ဍာရေးအတွက် MBA ဘွဲ့ရရှိခြင်းနေကြသည်။ သငျသညျကျိန်းသေယူအေအီးဘဏ်များအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူစကားပြောသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ယူအေအီးအတွက် HR ဌာနဝယ်ယူဆော်ဒီအာရေဗျ, ကာတာ, ကူဝိတ်။ သေချာဘို့သင်၏ CV ကိုလက်ခံရရှိရန်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။
သငျသညျမှစဉ်းစားနိုငျတဲ့နောကျအကောင်းကုမ္ပဏီ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲကာတာနိုင်ငံမော်ရိုကိုအဲဂုတ္တုပြည်သည်အ။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုနေဆဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြားခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ထိပ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများသည်နှင့်အမျှကျနော်တို့ GCC ဒေသအတွက်ဘဏ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရေနံဖြစ်ကြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများအများစုမှာအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ် Uber အတူလုပ်ကိုင်စတင်ရန်။ ယူအေအီးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ကျနော်တို့အနေနဲ့ NBAD နှင့် FGB ပေါင်းစည်းထားရှိခဲ့ကြသည်။ ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့လူတန်းစားနဲ့ပထမဦးစွာအဘူဒါဘီဘဏ်ယူအေအီးအတွက်အဘူဒါဘီအခြေစိုက်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများအများစုမှာလမ်းဖွင့်ရွေ့လျားနေကြသည်။ အီဂျစ်ငွေကြေးကိုတန်ဖိုးချခြင်းကို၏နောက်ကျောကိုချွတ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမုန်တိုင်းဒဏ်အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရသောခံခဲ့ရပေမယ့်။ အတွင်းကိုအဲဂုတ္တုကုမ္ပဏီများဒီတော့တချို့ ဒူဘိုင်းက၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုရရှိထားသူ အာရပ်ကမ္ဘာစာရင်းထဲတွင်ထိပ် 100 ကုမ္ပဏီများမှ၌တည်၏။
Top-rated ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့အဖြစ်ဖေါ်ပြခြင်းဒူဘိုင်းမြို့။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစတော့ရှယ်ယာလဲလှယ်မှုကြီးထွားလာ Bitcoin စျေးကွက်မှထက်ပို 175% ရရှိခဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးကနေအဆိုပါကုမ္ပဏီများကစီးပွားရေးလောကအတွင်းအများဆုံးရရှိအောင်။ ထဲမှာ foreground ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ ရေရှည်မှာဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကြီးထွားလာ.
ဥပမာအားဖြင့်ကမ္ဘာ့တယ်လီကွန်းဦးပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းလည်း America မှာထိပ်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကုမ္ပဏီများစာရင်းကိုအပေါ်ထိပ်ရရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ယခုနှစ်အဘူဒါဘီနဲ့ ဒူဘိုင်းကကြိုဆိုကြသည် အနည်းငယ်သစ်ကိုကုမ္ပဏီများ: Omantel, ဘာရိန်းအမျိုးသားဘဏ်, Emaar အဆိုပါစီးပွားရေးဇုန် City နှင့်ဆော်ဒီမြေပြင်န်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှာပေါ်မှာဤကုမ္ပဏီအများစုမှာ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ထိပ်တန်း 100 ကုမ္ပဏီများအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်
SABIC အတွက် No.1 ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ Careers
အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ SABIC နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အမြဲ SABIC အထူးအလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကြာသည်ဟုယုံကြည်သည်။ နှင့်သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးခြားနားချက်စေနိုင်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ် သငျသညျသမာဓိရှိထားဖို့လိုပါမယ်။ စမတ်နှင့်တောက်ပသောစဉ်းစားတွေးခေါ်။ ဒါပေမယ့်ကြိုတင်မဲအတွက်, သင်အဖြစ်မှန်သို့မိမိတို့၏စိတ်ကူးများကိုဖွင့်ဖို့လွတ်လပ်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ SABIC ကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးနှင့်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက် No.1 ကုမ္ပဏီ.
ထိုကဲ့သို့သော SABIC ရှိခြင်းအဖြစ်ကုမ္ပဏီများကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကော်ပိုရေးရှင်း Open-စိတ်တူကိုယ်တူစီမံခန့်ခွဲမှုကိုရှာဖွေရှာဖွေနေ။ မြင့်မားသောစစ်ဆင်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မေးမြန်းလူတို့နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ပါရမီရှင်။
SABIC အသစ်ကပိုလတ်ဆတ်များအတွက်အခြေအနေများဖန်တီးပါ။ အထူးသဖြင့် အခွက်တဆယ်ကိုနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ဒါကြောင့်သင်ကအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျေပွန်မှာရှာကြသည်လျှင်။ ကြည့်ဖူး အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက် 2019 ၌သူတို့ကိုမှာ။
ဒီနည်းပညာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူနေတဲ့အချိန်ကိုယူပြီးကျိုးနပ်သည်။ သူတို့လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ SABIC များအတွက်အလုပ်စတင်ရန်ဒါခက်ခဲသည်မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပြီးသင်အသစ်များဖြေရှင်းချက်ရှာတှေ့နိုငျသူဆိုရင်။ ထို့အပြင်ပိုကောင်းများအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲသောအာရပ်စီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေထားပါ။
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ CBI အတွက် No.2 ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်
ကာတာနိုင်ငံအမျိုးသားဘဏ်ဤသည်ကြိုးစားရန်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အလုပ်တစ်ခုရဖို့။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်တစ်ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ယူအေအီးဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုလူများစီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါ CBI ရူပါရုံကိုနှင့်မစ်ရှင်နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဖောက်သည်အစေခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ CBI ကုမ္ပဏီသူတို့အတွက်အကြံထမြောက်ရသောအကူညီခြင်းဖြင့်လူတွေကိုသင်တန်းပေး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဘဝတွေကို.
အဆိုပါ CBI သစ်ကိုအလုပ်ရှင်များ၏ထောက်ခံမှုအတွက်မိမိတို့လက်ကိုရယူပါ။ အစည်းအရုံး ယူအေအီးအစိုးရအနေဖြင့်ရူပါရုံကို။ CBI အတွင်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုမတူကွဲပြားမှုများနှင့်ထည့်သွင်းစီမံခန့်ခွဲ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သူတို့ရဲ့လူတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ဟာရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလားအလာများ၏သက်သေပြမှတ်တမ်းများ အဘယ်သူသည်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးမှရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။
သင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်နိုင်ကြသည်လျှင်။ သင်ဤကုမ္ပဏီ join သငျ့သညျ။ နှင့်ဖောက်သည်များကသူတို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့ဂုဏ်ယူရလိမ့်မည်။ သင်တန်း၏, ဒီကုမ္ပဏီကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ.
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအတွက် No.3 Fab ဂျော့ဘ်
ပထမဦးစွာအဘူဒါဘီဘဏ် Bloomberဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအဘူဒါဘီဘဏ်ဂရမ်။ ဒါကကုမ္ပဏီခိုင်မြဲစွာန်ထမ်းတွေနဲ့အားကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲကယုံကြည်ကြသည်။ ကျိန်းသေ, ပိုကောင်းများအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် tadeeper ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနားလည်မှုရှိခြင်း Fab ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။
အဆိုပါ Fab နှင့်ဘုံလူသိများ name ကိုပထမဦးစွာအဘူဒါဘီဘဏ်ဖြစ်ကြသည်။ နှင့် အဘယ်အရာကိုတကယ်သူတို့ကိုအရေးပါနေတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ retention ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်မန်နေဂျာနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ ဒူဘိုင်းအတွက်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအသင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်နေသောလူငယ်ပြောင်းလဲနေသော, လုံ့လရှိသူနှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးကလူရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျကိုတှေ့နိုငျပါသညျ။
ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များအထူးသဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအသည်းအသန်ဖြစ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထူးချွန်ကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်အသစ်တစ်ခုပြည်ပရှိအဖြစ်သငျသညျစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေယူဖို့အဆင်သင့်ရတဲ့ရပါမည်။ မှစတင်ပါ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ supercharge Fab အတူ။ သင်သည်သူတို့၏မစ်ရှင်ပေါ်မှာဤဘဏ်ကဝင်ရောက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါအလုပ်အကိုင်များကိုသင် LinkedIn တို့ထံမှရနိုင်ဆက်ကပ်။
NCB ဘဏ်နှင့်အတူ N0.4 ပင်လယ်ကွေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
NCB သည်အဆင့်မြင့်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်များ NCB Bank ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အသစ်တစ်ခုအဖြစ် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ပြည်ပရှိ။ သငျသညျကျိန်းသေပင်လယ်ကွေ့အတွင်းစံပြအလုပ်ရှင်များရဲ့ထိပ်မှာထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒီကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘို့ သာ. ကွီးမွတျရှေးခယျြစရာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် GCC အလုပ်အကိုင်များအားလုံးကိုဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်အကိုင်အဘို့။ NCB ဘဏ်နှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်လူများကဖြစ်စေဘို့ရှိနိုင်ပါသည်။ NCB ဘဏ်စာရင်း၏ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူသစ်ကိုမန်နေဂျာများအတွက်.
ဤသည် GCC အလုပ်ရှင်လက်ရှိတိုးချဲ့တဲ့အမြင်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ယူအေအီးနိုင်ငံအဘူဒါဘီနဲ့ Sharjah သည်။ သူတို့ကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းကြီးထွားလာခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အသစ်ကဘဏ်ခွဲကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အမြဲ join လိုသောသူတို့အဘို့အလုပ်အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း ဒီဘဏ်။
ဒါကကော်ပိုရေးရှင်းကောင်းတစ်ဦး HR အဖွဲ့ရှိခြင်း။ သူတို့အသစ်ကအလားအလာအလုပ်ရှင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နေစဉ်။ အသစ်ရာထူးကြောင်းဖြတ်ပြီးလာဖန်တီး ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအသစ်အလုပ်အကိုင်များ.
အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးခိုင်ခံ့သောအလုပ်သံသရာရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အိန္ဒိယအချို့စကားပြောနှင့် ပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်လုပ်ကိုင် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ get တစ်ဦးချင်းစီအနေအထားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အဖော်ပြချက်သတ်မှတ်။
အဆိုပါ NCB အလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဟာကျွမ်းကျင်သူများအများစုဟာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ပါသည်ပူဇော်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေသူများအနေဖြင့်သင်သည်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်နှင့်ကောင်းစွာ NCB မှဝင်ရောက်ရှာဖွေနေဒီကုမ္ပဏီပြုလုပ်ခြင်းလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရမှတံခါးများဖွင့်လှစ်။
No.5 Etisalat ယူအေအီး Careers
အလုပ်နောက်ထပ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ Etisalat ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဖို့အကောင်းဆုံးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်ဆိုသောကွောငျ့ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအရင်းအမြစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ Etisalat ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် အာရှနှင့်တောင်အာဖရိကကနေအသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်.
သငျသညျရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် အားကြီးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ရန် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ သင်သည်သူတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပွင့်လင်းအလုပ်အကိုင်ပို့စ် system ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသောကြောင့် အသစ်တစ်ခုကိုဝန်ထမ်းတည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်.
အလွန်လွယ်ကူပါတယ် အလုပ်လျှောက်ထားရန်အလုပ်အကိုင်အစာမကျြနှာ။ တဖန်သင်တို့ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်နေရာလွတ်တစ်ခုကြည့်နိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်တိုးတက်မှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက်ကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီနှင့် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောယူအေအီးအဖြစ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိ, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာနိုင်ငံ။
အယ်လ် Rajhi ဘဏ်ထဲမှာ No.6 ဂျော့ဘ်
အယ်လ် Rajhi ဘဏ်ကျိန်းသေကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးအစ္စလာမ္မစ်ဘဏ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အဆိုပါဘဏ်အယ်လ် Rajhi 1957 အတွက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများစတင်လိုက်ပါပြီ။ ထိုအချိန်မှစ. အကြီးအကျယ်တိုးတက်မှုကဒီကုမ္ပဏီကိုကူးရောက်လေပြီ။
အယ်လ် Rajhi ဘဏ်တစ်ခုဝန်ထမ်းအတှေ့အကွုံ 50 နှစ်ပေါင်းအတော်ပင်။ ထိုအခါသူတို့ကိုကျော် 90% ရှိပါတယ် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆက်လက်ပျော်ရွှင်။ ဘဏ္ဍာရေးအတှေ့အကွုံအတူ GCC အတွက်မန်နေဂျာအများစုဟာဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းစတင်သည်။
အပြုသဘောဘက်တွင်, ဘဏ်အစ္စလာမ့်ရှီးအခြေခံမူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤရွေ့ကား, အာရဗီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အတော်လေးအပြုသဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဤဘဏ်အဘို့ခိုင်ခံ့အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်လှစ် အသစ်အလုပျသမားမြားအားလုံးကို၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ.
သငျသညျဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်ရှည်လျားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်၎င်း၏ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်ရူပါရုံကြောင့်ရှာကြသည်အဖြစ်။ သငျသညျထိုသူတို့အား CV ကို forward သငျ့သညျ။ အယ်လ် Rajhi ဘဏ် အိန္ဒိယကနေလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူငှားရမ်းနေ နှင့်ပါကစ္စတန်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပျော်မွေ့လျှင်။ ဒါကကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။
ဘဏ်မှ Inan, ထို့အပွငျ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်ကမ်းလှမ်းမှုများ။ ဒါကကုမ္ပဏီဆွဲဆောင်မှုစတင်လစာပေးနှင့်အာရပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြင့်မားတဲ့ရိုသေလေးစားမှုကြောင့်။ သငျသညျကိုပုံမှန်လစာနှစ်တိုး, စရိတ်နှင့်အပိုဆုကြေးငွေရနိုင်သည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, ဒီကုမ္ပဏီအဖြစ် သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု packages များဖန်တီး။ အတူတူပြိုင်ဘက်ကင်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအသစ်သောစီမံကိန်းများကို ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအခွင့်အလမ်းများ။
လူအစော်ဘွား NBD အပေါ် No.7 ဘဏ်လုပ်ငန်း
သင်ကယူသောအရာကိုရှိပါသလား စော်ဘွား NBD အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ သင်ကအလုပ်လုပ်နှင့်ဤဘဏ်နှင့်အတူကြီးထွားဖို့ကြာသောအရာကိုရှိတယ်ထင်ပါသလား ?. NBD အတွက်စော်ဘွားနှင့်အတူ, သင်သည်ဤအာရပ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအောင်မြင်ဖို့အဆင်သင့်သတ္တုရိုင်း? ဒါပေမဲ့ သငျသညျသစ်ကိုရာထူးလျှောက်ထားခင်။ ကြည့်ရှိသည်နှင့်သင်ပြုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဏ္ဍကိုသင်စီမံခန့်ခွဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ဆုံးဖြတ်။ ဤသည်ကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုကြီးထွားလာကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အခိုငျအမာစစျဆေးဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ နှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု NBD တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူပြည်တော်ပြန်အများစုထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် သင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရှိသေချာအောင် ဒီကော်ပိုရေးရှင်းသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်းမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဒါကြောင့်ယူအေအီးအတွက်လူကြိုက်များငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများအပေါ်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်ဖို့ကတန်ဖိုးရှိကြလိမ့်မည်။
ဆော်ဒီလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီစဉ်းစား သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ဆောင်ခဲ့။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၏စွန့်စားမှုစတင်ပါ။ ယင်း၏၏အခြေခံစီမံခန့်ခွဲဆော်ဒီကုမ္ပဏီများမှ ယူအေအီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း။ ယင်း၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖေါ်ပြခြင်းဆော်ဒီလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ။ အထူးသဖြင့် 2018 နှင့် 2019 ၌တည်၏။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများအများစုဟာ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအံ့သြဖွယ်ဝင်ငွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆော်ဒီလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ပါသည် သူတို့ရဲ့သစ်ကိုဝန်ထမ်းများအတွက်အထူးပြုအစီအစဉ်များ.
ဒါကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးထွက်ပုံဖော်ဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ရှာဖွေသူများသည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏မွေးမြူရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များအတွက်အင်ဒီးယန်းအားမရ ဒူဘိုင်း, ကာတာနှင့်သင်တန်းဆော်ဒီအာရေဗျ၏။ သင်သဘောတူ၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုသေချာသည့်အခါအခါတိုင်း ရေရှည်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေ.
သငျသညျအရည်အချင်းကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုရာထူးအပေါ်ယူ။ လတ်ဆတ်တဲ့ မှစ. အကြီးတန်းမန်နေဂျာရာထူးအထိဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအားထုတ်မှုအလုပ်အကိုင်များဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၏လယ်ပြင်တွင်သိသာသောကြီးထွားမှု, အိန္ဒိယလုပ်သားအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးမြှင်.
ဆော်ဒီတယ်လီကွန်းနှင့်အတူ No.9 တစ်ဦးကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
နောက်ထပ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် ဆော်ဒီတယ်လီကွန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျှော်မှန်းချက်ဆော်ဒီတယ်လီကွန်းနှင့်အတူလွှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီကူညီပေးနေ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူ.
STC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးထွားလာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီထုတ်ပေး သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ထမ်းတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအနာဂတ်။ STC အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်တပြင်လုံးကိုပင်လယ်ကွေ့အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။
STC သငျသညျပွုပါမညျအရာအားလုံးထဲမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြိုးပမ်း။ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိတက်အခြေခံတာဝန်များကိုမှ။ တစ်ဦးအတွက် သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လမ်း။ သငျသညျပိုကောင်းတဲ့မနက်ဖြန်တစ်ခုခရီးဖြင့်စတင်နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက join သငျ့သညျ။
ကူဝိတ်၏ No.10 အမျိုးသားဘဏ်
ကူဝိတ်အမျိုးသားဘဏ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေ။ ကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များအတွက်စုဆောင်း။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်တစ်ဦးအဖွဲ့သည် join ဖို့ရှာဖွေနေနေကြပါတယ် ?. သင်လက်ပေါ်မှာအားကြီးသောစွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာရပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပေးခင်မှာ။
အခါတိုင်းသင်ဤဘဏ်နှင့်အတူအနေအထားကိုစတင်ပါ။ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖျော်ဖြေစတင်မည် သင်အစဉ်အဆက်ကစဉ်းစားခြင်းထက်သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားစေမည်။
သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောမှာ။ NBK မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလုပ်ခွင်နှင့်တက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်း join - ချုပ်လုပ်ကူဝိတ်ရဲ့တောက်ပစိတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီး drives တွေကိုရန်။
ကျနော်တို့ကလိမ့်မည်တဲ့ Talent: စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရှိ သငျသညျလျှောက်ထားပါတယ်သေချာအောင် သငျသညျရှင်သန်နိုင်အောင်တင်လိုက်တယ်။ NBK မှာသင်တစ်ဦးကြိုး setting ကိုမှသင့် hard အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုရနိုင် - သင်ကူဝိတ်ရဲ့တဦးတည်းမှပံ့ပိုးနေကြသည်ဟုသိမှတ်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လာလိမ့်မယ် အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှု.
အကောင်းဆုံးကိုတစ်ဦးဖြစ်လာရန်တစ်ဦး NBK အဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။
ADCB ဘဏ်ရန်ကွိုဆို No.11
ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်သည်ငါတို့စာရင်းထဲမှအခြားကုမ္ပဏီ ADCB ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာယူအေအီးအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဏ်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1985 အတွက်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေးစတင်သည်။ ထိုအရပ်၌အနေဖြင့်ဘဏ်အတော်လေးစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ယူအေအီး၌မိမိတို့ရှေ့မှောက်တွင်လူသိများဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီမှ Apply နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အခွင့်အလမ်းကိုဖမ်း။
ဒါကကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များဘို့အစွမ်းသတ္တိကိုမှခွန်အားသွားပြီ။ ADCB ဘဏ် အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခွင့်ပြု အဖွဲ့အစည်းကိုဖြတ်ပြီး။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောကုမ္ပဏီတစ်ပြည့်စုံရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်ရှာအတွက်စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကကမ္ဘာတစ်လွှားကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်သင့်အား enable ။
ဆမ်ဘာနဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေး Explore No.12
Next ကိုကောင်းသောကုမ္ပဏီ Samba သည်။ သူတို့တစ်တွေဝန်ကြီးချုပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုမှတပါး, စီမံခန့်ခွဲမှုပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာရှိနေခြင်းနှင့်အတူလည်ပတ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယမွန်ဘိုင်းဒေသ။ အဆိုပါ Samba ကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ဤမျိုးနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အပျြောအပါးရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်အတူသစ်ကိုလူတို့အဘို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကောင်းသောအသိအမှတ်ပြုအတွေ့အကြုံကို.
Samba ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်လုပ်ငန်းက၎င်း၏ဆန်းသစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ အဆိုပါ Samba ရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာသိသည်။ ထိုစိတ်သဘောကိုအတွက်သူတို့နှင့်အတူတစ်ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားရှိသည်ဖို့ကြိုးစားပါသို့မဟုတ်ဖြစ်စေသည့်အတူဒါ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း.
အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် excel မှ၎င်း၏အလိုဆန္ဒနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Explore ။ ကျိန်းသေဆမ်ဘာနဲ့အလုပ်လုပ်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာစေမည် အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် ထိပ်တန်း-tier ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်။ နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှု KSA အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှသေချာသည်။
No.13 Emaar အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ
နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ Emaar ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ GFor ဥပမာ အီရန်ကျွမ်းကျင်သူများ အဖြစ်အိန္ဒိယလုပ်သားများ။ Emaar ကုမ္ပဏီမေတ္တာရှင်။ အဆိုပါ Emaar 's စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသောကြောင့် ယူအေအီးအတွက်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်.
Emaar ကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သူတို့က enthusiaan stic, လုံ့လရှိသူ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသင်းကစားသမားများအဘို့ရှာကြ၏။ ကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်စုဆောင်း။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးလျှင်ဒါ။ သင်တစ်ဦးအလျှင်အမြန်ကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်လုပ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်မှန်အတွက် Emaar Properties ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ရပါမည်မဟုတ်။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ကြပြီးကြီးမားဝင်ငွေ generate ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒါကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရတဲ့ သူတို့နှင့်အတူအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သင့်သည်။
No.14 DP ကမ္ဘာ့ဖလားကို Global ကုန်သွယ်ရေး
DP ကမ္ဘာ့ဖလားကုမ္ပဏီမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သူတို့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားကဏ္ဍများအတွင်းငှားရမ်းသည်။ DP ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အစိတ်အပိုင်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံ။ DP ကို ​​Global ကုန်သွယ်ရေးတစ်ကမ်ဘာလုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့် အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ.
DP ကမ္ဘာ့ဖလား 77 operating မရိန်းတပ်ဖွဲ့တစ်အစုစုရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သူတို့အလုံအလောက်ကောင်းပါတယ် တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ ပြုရရန်ကြိုးစား, DP ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းကိုဖမ်း။
ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲ extensions တွေကိုအတွေ့အကြုံကိုသားရှိခြင်းကဒီကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ DP နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂလိုဘယ်ကုန်သွယ်ရေးခြောက်လတိုက်ကြီးအနှံ့ 50 နိုင်ငံများတွင်ကျော် 40 ဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကထောက်ခံသည်။ ဒီလိုမျိုး, သငျသညျတကမ္ဘာလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
No.15 Riyad ဘဏ်ဂျော့ဘ်
Riyad ဘဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်စတင်ပါ။ သူတို့ကြောင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်သားများစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ဒါကဘဏ်ကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျောနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်, သင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးအနေအထားကိုရနိုင်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဇာတိမြေဖြစ်ပါတယ်။ အားကြီးသောကော်ပိုရိတ်များနှင့်လက်လီဂိမ်းရှိခြင်း Riyad ဘဏ်ဂျော့ဘ်။ သူတို့ရဲ့ရာထူးမှာအသေးစိတ်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိ။ ဒါကကုမ္ပဏီလည်းရွေ့လျား ယူအေအီးအတွက် cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ.
No.16 Ooredoo ကကုမ္ပဏီ
Ooredoo ၏ကြီးထွားလာသောဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ MENA အတွက်အဖွဲ့အစည်းက။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဒေသအလိုက်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင် extensionally ကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ နှင့်ကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရာထူးရှိခြင်း။
Ooredoo ကကုမ္ပဏီဆက်ကပ်အပ်နှံန်ထမ်းများငှားရမ်းဖို့မျှော်လင့်။ ဆက်လက်ရန်နေစဉ် ပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုဦးတည်ရွှေ့။ Ooredoo ကကုမ္ပဏီ 20 အားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်း 2020 ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအကြားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမျှော်လင့်။ နယူး အလုပ်အကိုင်ရတဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့နှင့်အတူ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, CV ကို upload လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
သူတို့ကအကြီးတန်းမန်နေဂျာသုံးသပ်သူများအထူးကုများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းငှားရမ်းထားပါသည်။ ရန်ထိုက်တန် သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။ သငျသညျဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူမြန်ဆန်စွာငှားရမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်အထူးသဖြင့်ပါ။
ဆော်ဒီကဗြိတိသျှဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက် SABB မှာ No.17 Careers
SABB ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကြီးထွားလာအောင်မြင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ SABB ဗြိတိန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အနာဂတျအတှကျမွငျ့မားမျှော်မှန်းချက်နှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည် HSBC ကနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။
ဤသည်ဆော်ဒီကဗြိတိသျှဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဆိုလိုသည်။ အမြဲပါရမီတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရှာကြ၏။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုကြီးထွားဖို့ရှာဖွေနေကြသူနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ နှင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း HSBC ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူအောင်မြင်။
သငျသညျကျိန်းသေသင့် အလုပ်အကိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ SABB မှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအချို့အဘို့မိမိတို့ website တွင် Check နှင့်လျှောက်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ။ သင့်ရဲ့ updated CV ကို Get ထနှင့်အပြေးနှင့်ဆော်ဒီဗြိတိန်ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
No.18 KFH ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအိမ်ဘဏ်လုပ်ငန်း
ကူဝိတ်ဘဏ္ဍာရေးအိမ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကရရကျိုးနပ်သည်ပင်လယ်ကွေ့တွင် KFH အလုပ်ရှာဖွေရေးစကားပြော။ တစ်ဦးအဖြစ် ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ကဏ္ဍများအတွက်အနာဂတ်ကျွမ်းကျင်သူများသငျသညျထိုသူတို့အား CV ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါကူဝိတ်ဘဏ္ဍာရေးအိမ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။ ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းပစ္စယတစ်ခုမှာသူတို့ပင်လယ်ကွေ့တွင်ငှားရမ်းနေကြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လုံလောက်သောကောင်းလှ၏။ ပင်ကျွမ်းကျင်သူများအမြိုးသမီးတနိုင် ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, KFH ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအိမ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကောင်းမွန်သည်။
ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပျလုပျဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတစ်ခုက။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအစ္စလာမ့်ဘဏ်ရှိပါတယ် မလေးရှားအနှံ့က၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ် အလုပ်သမားများနှင့်ပါကစ္စတန်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကပဲပါကစ္စတန်စတင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဒေသကြီးကျော်ယခုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဘဏ်ရည်မှန်းချက်ကြီးဘဏ္ဍာရေးအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများမြင့်တက်နေသည်။ "ကမ္ဘာ့ဖလားအတန်းအစားဘဏ်လုပ်ငန်း, အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်" ပေးင်း၏ခရီးအပေါ်သို့ပါကစ္စတန်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်ဖြစ်ပါသည် ပါရမီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထူးကုဖိတ်ခေါ် DIBPL join ဖို့။
မွတ်စလင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအလုပ်လုပ်အားလုံးအလုပ်အကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအခွားသူမြားအားနားထောင်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရပေမည်။ ဘဝဆန်းသစ်တီထွင်မှုပျော်စရာနှင့်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကမွတ်စလင်လူတစ်ဦးအဖြစ်နေထိုင်နေကြ။ ဘဏ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ပုံဖော်ကြောင်း core ကိုတန်ဖိုးများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း.
No.19 Banque ဆော်ဒီ Fransi
Banque ဆော်ဒီ Fransi full-service ကိုစီးပွားဖြစ်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို်ထမ်းဆောင်ဘို့အလွန်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောဘဏ္ဍာရေးအလုပ်ရှင်များတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကသုံးသပ်။
ဤသည်မြဲမြံစွာဒါဟာပြည့်စုံဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ များသော သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မျှော်လင့်ကျွမ်းကျင်သူများ။ လူတွေအများအပြားကဒီကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ကိုချစ်သောသူ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျော၌။ ဒါကြောင့် Banque ဆော်ဒီ Fransi ၌မိမိတို့နေရာလွတ်ဘို့ကယ့်ကိုထိုက်တန်သည်။
ဤဘဏ်ကိုလည်းအခြားစျေးကွက်ဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေ။ BSF ရဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းက၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့နှင့်အတူတစ်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါ, ကျိန်းသေကကျိုးနပ်သည်။
No.20 Attijariwafa ဘဏ်
အဆိုပါ Attijariwafa ဘဏ်မော်ရိုကိုအတွက်ဦးဆောင်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာဘို့မဟုတ်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ထိပ်တန်း 10 ကုမ္ပဏီများမှ၌တည်၏။ အဆိုပါ Attijariwafa ဘဏ်တစ်ခုအတော်လေးဖြစ်ပါသည် စိတ်ဝင်စားအလုပ်ရှင်။ ဒါကကုမ္ပဏီမိုဟာမက် VI ကိုရဲ့ကျင်းပနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီ SNI inking ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ Attijariwafa ဘဏ်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုအခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Banque Commerciale du maroc နှင့် Wafabank နှင့် Casablanca အခြေစိုက်အကြားမန်နေဂျာစာချုပ်။ ပြုမိလျက်, Marroco ဘဏ်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ ကုမ္ပဏီများသည် Attijariwafa ဘဏ်နှင့်အတူကောငျးမှဖြစ်ကြသည်။
ယော်ဒန်မြစ်အတွက် No.21 အာရပ်ဘဏ်
ယော်ဒန်မြစ်အတွင်းအာရပ်ဘဏ်တစ်ဘဏ်အတွင်းကောင်းသောကုမ္ပဏီနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ယူအေအီးအတွက်အများကြီး operating မပေးပါ။ အာရပ်ဘဏ်, အများကြီးမှာ လူတွေကိုအလုပ်အကိုင်အစိတ်ဝင်စားတွေ့ရှိခဲ့။ သူတို့ဒေသအတွက်ဦးဆောင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအတွက်မာနထောင်လွှားယူအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်တွေကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့စီမံခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ကကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားအင်အား၏စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါရာ။ အဆက်မပြတ်ကျနော်တို့ ထူးချွန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများကို, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်, အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ခနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခွင့်အလမ်းများ။
အာရပ်အမျိုးသားဘဏ်မှာ No.22 Careers
အာရပ်အမျိုးသားဘဏ်မှာ Careers ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိသငျသညျယူလိမ့်မည်ဟုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် GCC အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ ဧရိယာ။ ဒါကကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားဘဏ်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများတွင်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များတို့တွင်အကောင်းလှ၏။
ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ သငျသညျ CV ကိုတင်ပြရန်သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာမှတ်ပုံတင်ရန်ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပြုနေစဉ် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှာဖွေနေနေရာလွတ်။ သင်အမြဲသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စသို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် drop နိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အာရပ်အမျိုးသားဘဏ်မှာ Careers ဖွစျလိမျ့မညျ သင်တို့အဘို့အထက်မြက်တဲ့ option ကို.
No.23 Mashreq ဘဏ် Careers
နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ Mashreq ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီးရှိပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းလမ်းများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို Mashreq မှာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဓိကအာရုံစိုက်မှာအကောင်းဆုံးအသင်းကိုကစားသမားကိုဆွဲဆောင်သည်။ အဆိုပါ Mashreq ဘဏ်ထိုမှတပါးကိုအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ပြီးစီဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေအထားအိုင်ဒီကောင်းသောစတင်စကားပြော။
ဤဘဏ်စျေးကွက်-မောင်းနှင်လျော်ကြေးနှင့်အကျိုးအမြတ်အထုပ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒါကြောင့် ပြည်တော်ပြန်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုက်ညီသင့်တယ် သူတို့နှင့်အတူပညာရှင်ပီသစွာ။ တည်ဆဲအလုပ်သမားတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကုမ္ပဏီ။ ထိုအခါပင်လယ်ကွေ့တွင် State-Of-The-Art အခွင့်အလမ်းများကိုအသစ်ဆက်ပေးသူနှင့်အတူ။
ဒီကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုအချိန်-စမ်းသပ်ပြီးတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်အော် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ကုမ္ပဏီများသည်။
လက်ဘနွန် No.24 ဘဏ် Audi
ဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှု၏ရှည်လျားသောပုံပြင်နှင့်အတူဘဏ်။ ဤဘဏ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝနှင့်ပိုမိုစုံလင်အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လေဗနုန်တောင်ပေါ်တစ်ဦးဘဝကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူ။
ဘဏ် Audi ကားစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ဘနွန်ဘဏ်များအကြားပထမဦးဆုံးအဆင့်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ရှယ်ယာရှင်များအများကြီးငှားရမ်းထားပါသည်။ ဤဘဏ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှယ်ယာ, ဖောက်သည်များ '' သိုက်, ချေးငွေနှင့်တိုးတက်မှုကယ့်အစအဦးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်အွန်လိုင်းစနစ်များရှိခြင်း Audi ဘဏ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည် ဘဏ် Audi ရဲ့ အခမဲ့။ လေဗနုန်တောအတွက်စူပါလူကြိုက်များ။
ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအတူလုပ်ကိုင်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်က e-ဘဏ်လုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ နယူးကျွမ်းကျင်သူများဒီကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏ CV ကိုအကောင့်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီစေရန်, ချေးငွေနှင့်ကတ်များကို '' လှုပ်ရှားမှုရောင်းချခြင်း။
No.25 Ahli ယူနိုက်တက်ဘဏ်
Ahli ယူနိုက်တက်ဘဏ် အဖွဲ့အစည်းအဆင့်များအားလုံးဝန်ဆောင်မှုထူးချွန်ပို့ဆောင်ရန်ကျူးလွန်နေသည်။ အားလုံးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံကျော်, ဒီဘဏ်အသစ်များကိုန်ထမ်းများအတွက်စုဆောင်းနေပါတယ်။
ငါတို့သည်စုဆောင်းရေးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၌အကြှနျုပျတို့၏အောင်မြင်မှုအကူတိုင်များစိုက်ထူဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ လူသစ် Ahli ဘဏ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေအဖြစ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီကိုဖြည့်စွက်ရန်ကျူးလွန်နေသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ.
ဒါကကုမ္ပဏီပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များအတွက်အလုပ်ရှင်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့အနေအထားကိုရှိခြင်း။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကျိုးနပ်သည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင် CV ကိုလုံလောက်အောင်ကောင်းသောတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားသေချာပါစေ။
တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအဖြစ်, သင်ဒေသအတွက်နေရာလွတ်ကိုရွေးနိုင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဘို့ဤကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ယင်းကိုလိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပြည့်စုံရာအလုပ်အကိုင်များရ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ။ ကကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်အောင်မြင်ကြာသောအရာကိုသိသောအတွေ့အကြုံနှင့်ထောက်ခံန်ထမ်းများဖြစ်လာသည်။
No.26 ZAIN တယ်လီကွန်မြူနီကေး
အလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်။ ကောင်းသောရေရှည်အလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ ZAIN ။ သငျသညျရှာတှေ့နိုငျရှိရာအရပ်တို့ကိုတစ်ခုမှာ ZAIN နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ LinkedIn ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့သူတို့ကိုသင်နှင့်အတူတစ်ဦးအခန်းအလွတ်ရနိုင်သည့်နေရာများတွေအများကြီးရှိသေး၏။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ZAIN ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျိန်းသေ, ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကိုတင်ပြဘို့ကယ့်ကိုထိုက်တန်သည်။ ZAIN နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ် Maroco, ဂျော်ဒန်နှင့်ကူဝိတ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိခြင်းလျှင် သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အတှေ့လိမျ့မညျ။ သငျသညျ Cal Center ကအော်ပရေတာသို့မဟုတ်ဝယ်ယူကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ် ZAIN နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။
No.26 Banque Centrale တို့ကို Populaire
Banque Centrale တို့ကို Populaire နှင့်သင်၏အခန်းကဏ္ဍရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ။
ဌာနချုပ် Casablanca, မော်ရိုကိုကဒီကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေနယူးပြည်တော်ပြန် သူတို့နှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။ မသာ Marocco မှ။ Banque Centrale တို့ကို Populaire လုပ် SA စီးပွားဖြစ်ဘဏ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နှင့်ကုမ္ပဏီများမျိုးနှင့်အတူ, တကအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လျှောက်ထားရန်ကျိုးနပ်သည်။
ဤရွေ့ကားဘဏ်လှုပ်ရှားမှုများအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိဏစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျိန်းသေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း application ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေး ဤဘဏ်နှင့်အတူ။ အဆိုပါ Banque Populaires Régionalesအတူအလုပ်သမားအဖြစ်ကောင်းသောငွေသားပေးချေမှုအတူ။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရနိုင်သည်။
တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသည်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ Credit Populaire maroc များ၏အဖွဲ့အစည်းများမှအကျိုးစီးပွား၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှု။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဆိုပါကုမ္ပဏီဖေဖော်ဝါရီလ 2, 1961 အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့သည်နှင့် Casablanca, မော်ရိုကိုအခြေစိုက်သည်။